Sri Lanka Tour kubva kuBhubaneswar | Dana pa: + 91-993.702.7574
Sri Lanka, aimbozivikanwa seCeylon, chiwi chiduku chiduku kumaodzanyemba kweIndia, muIndia Ocean, asi ndicho chinhu chiduku chete pamusoro penyika yakanaka. Tine Sri Lanka Tour yedu kubva kuBhubaneswar purogiramu, uchasvika pakuona zviitiko zvinotyisa muSri Lanka. Zviratidzo zvakasiyana-siyana zvinowedzera kubva kumahombekombe emvura uye pfupa-yakaoma minda kune nyika dzakanaka uye mhenderekedzo yejecha. Nyika yacho inoshandiswa nehupenyu hwekare, dzegoridhe dzine mabhandi emhenderekedzo dzakasvibirira, mapiri, uye rubber uye masango. Ne Sand Sand Pebbles 'Sri Lanka Tour kubva kuBhubaneswar, unogona kuwana zviitiko zvose zvinobaya mwoyo kuongorora Sri Lanka. Paunenge uchishanyira chitsuwa ichi, uchaona zvivakwa zvemakoloni kubvira mumazuva echiPutukezi, ChiDutch uye Chirungu. Iwe uchaona mijenya yenzou, dzimwe dzacho dzinobatanidzwa mumitambo yemunharaunda uye, ingwe pamasango epamusoro. Sri Lanka nyika inopfuma kwazvo maererano nematongerwe enyika, tsika, uye tsika. Kune vatashanyi vanofarira kupupurira nhoroondo yenzvimbo chero ipi zvayo, Sri Lanka inopa katatu yechitsika kwavari. I Sri Lanka Tour kubva kuBhubaneswar ichakusiya uchinetseka nezvinhu zvose zvakanaka zvisikwa zvinofanira kupa. Sri Lanka inozivikanwawo nokuda kwemahombekombe egungwa uye zuva regoridhe rinopenya kumativi ose egore. Sri Lanka anozvirumbidza kune dzimwe nzvimbo dzakakura dzePasitomu dzakadai seYala National Park, Wilpattu National Park, Minneriya National Park, Udawalawe National Park uye Horton Planes. I Sri Lanka Tour kubva kuBhubaneswar ichakutendera kuti uongorore matenga maduku muIndia Ocean.
Iine chimwe chinhu chokupa kune marudzi ose evakashanyi- Rudo rwechimiro, vana, vanoziva kana mamwe marudzi. Kukura kwekushanyirwa muSri Lanka hakune chiratidzo chekumira nokukurumidza kana kuti gare gare. Bhuku rako Sri Lanka Vacation Packages ikozvino.
Mutambo Wokushanyira: 1001
ZUVA 01: KATUNAYAKE - KANDY - 115 Kms 2.5 Hours
Anosvika kuBararanaike International Airport, Katunayake inogamuchirwa nemumiririri we "Spiceland Colombo" uye kutamira kune hotera kuKandy nePinnawala.
Elephant Orphanage, Pinnawala:
Mudiki - musha wezvenje dzezera rakasiyana nekudyisa kwekukura, kushambidza, kutamba pamwe pamwe nekukwirirana. Izvozvi zvakawanikwa zvichikuvara kana kusara zvakasiyiwa murenje. Iko kune kunyange mwana muduku mhuru akaberekerwa mukutapwa.
Tafura yenguva yeEphantphant Orphanage:
08.30am Kuzarura nherera yevashanyi
09.15am Bhokisi-kufudza mwana nzou
10.00am Morning bath at 'Ma Oya'
12noon Nherera dzokera kunherera shure kwekushambidza
01.15pm Bhuku-kufudza mwana nzou
02.00pm Kushambidzira kwemaawa masikati pa 'Ma Oya'
04.00pm Nzou dzinodzokera kunherera shure kwekushambidza
05.00pm Bhuku-kufudza mwana nzou
06.00pm Kuvhara nherera yevashanyi
Spice Garden muHingula (Kandyan Spice 99):
Inowanikwa mumugwagwa mukuru pakati peColombo uye kugomo guru reKandy. Enda kune imwe munda wezvinonhuwira Hingula muMawanella kuti uone marudzi akawanda ezvinonhuwira kuSri Lanka inozivikanwa. Dinamoni, Cardamom, Pepper, Cloves uye nutmeg dzakarima nzvimbo iyoyo. Mukuwedzera kumunhu mumwe nomumwe zvinonhuwira, imba yacho yakatengesa shanduro yake yeSiri Lankan curry powder.
Temple Of The Doo Relic, Kandy:
Temberi yeDzino Dzvene Relic yeBuddha Ndiyo temberi inokosha kupfuura yeSri Lankan Buddhist uye yakavakwa muC16th Century AD nemambo Wimaladharmasooriya, chete nechinangwa chekugara mazino relic.
Kudya uye Kudya Manheru Masikati anogara paIndaneti muKandy.
ZUVA 02: KANDY - NUWARA ELIYA - 77 Kms - 3.5 Hrs
Chikudya chamangwanani paIndaneti muKandy & siya kuNuwara Eliya nePeradeniya neRamboda.
Iri raiva munda wekunakidza weK Kandyan King we16th Century uye akazoitwa muBhanan Botanical munguva yehurumende yeBritish.
Maawa Okushanda: 7.30am - 5.00pm (zuva nezuva)
Restaurant newaini: 10.00am - 5.00pm
Gem Museum ("Tiesh" naLakmini):
Tiesh yakazivikanwa se Lakmini Pvt Ltd yakange yakave nzvimbo yakagadzirwa nematombo anokosha uye mabwe anokosha zvakagadzirwa nemaoko emhando yakanakisisa kupfuura gore. Pakati pezvikamu zveSri Lankan matombo anokosha anonyanya kudarika pasi pose ndeye Blue Sapphires, Star Sapphires, Rubies, Star Rubies, White Sapphires, Yellow Sapphires, Girafu Ziso, Etc.Chimwe chinhu chinoshamisa chekugadzwa ndechimiro cheGem yangu inoshandiswa kuva inokosha mabwe anokosha muSri Lanka. Zvinonyanya kuwanikwa mumoyo weSri Lanka mune mifananidzo-guta rakakwana raKandy "Tiesh" Inotora kune zvikamu zvose zvevatengi. Tiesh neLakmini yaive iri mberi kwemazuva ano ezvigadzirwa zvematombo kubva kune zvigadzirwa mu 1997.
Mackwoods Labookellie Tea Centre:
Yakave inenge mamiriyoni emamiriyoni kumusoro kwegungwa mukati memwoyo weLabookellie Estate, imwe yenzvimbo dzakanakisisa dzekudyara muSri Lanka, iye zvino inzvimbo yakakurumbira kune imwe nyika inofamba nhanho dzevaya vanofamba munyika yose vachipa mukana wekuwana tea yaMackwoods panguva yakanakisisa mu salubrious makomo mumakomo pamwe nekupa ruzivo rwekunzwisisa kwekugadzirwa kweTeylon Tea. The Labookellie Tea Centre iyo yakave yakareba nyika inonyanya kuzivikanwa pakati pevamwe vekune dzimwe nzvimbo uye vatashanyi kuNuwara-Eliya kubva kuKandy nokuda kwezvavanoda zvebindu tsvina yepamusoro yeLabookellie Tea. Iyi Tea Centre yakakurudzirwa uye yakagadziridzwa kuti ipe vashanyi vayo vazhinji nevatengi basa rakanaka mune imwe nzvimbo yakagadzikana. Mackwoods inopa vashanyi nerwendo rusununguko rwakatungamirirwa neLabookellie tea factory, ruzivo rwekudzidzisa mukurima kweii uye nzira yekugadzira.
Gliding nokukurumidza pasi makomo emakomo, masango masango nemipata yeTe Estates, mitsuko midiki inoshanduka mumatunhu ari pakati nepakati inobereka mamwe emvura zhinji yeSri Lanka, imwe yeyo "Ramboda Waterfalls" muNuwara Eliya. Kushungurudza pasi panzvimbo yakakwirira ye3200ft. iyo Ramboda Falls inounza kudada uye kubwinya pachitsuwa ichi chakanaka ichiita Sri Lanka nzvimbo inozivikanwa yevashanyi kuenda kune vose vanoratidzira rudo uye nature lover.
Kudya uye Kudya Manheru Masikati anogara paIrawara Eliya.
ZUVA 03: NUWARA ELIYA - BENTOTA - 240 Kms - 5.5 Maawa
Chikudya chamangwanani paIndaneti muNuwara Eliya uye uende kuBentota
Kudya uye Kudya Manheru Masikati anogara paIndaneti muBentota.
ZUVA 04: BENTOTA - COLOMBO - 65 Kms - 2 Hours
Chikudya chamangwanani paIndaneti, Bentota uye uende kuColombo
Zvirongwa zvakatangwa kuti zvichengetedze huwandu hwehutu huri kusvika pakuparara uye mapurojekiti akadaro anowanikwa nechekumaodzanyemba kweSri Lanka apo tende dzinouya kumahombekombe kuti dziise mazai avo. Huru inochera gomba paBhangi, Inoisa mazai ayo uye inoifukidza nejecha apo inofanirwa kuve, inobatanidzwa nekupisa kwezuva. Chinoitika kakawanda ndechekuti mazai anochera nevabati vehove uye vanotengeswa kuvanhu vanovadya. Asi ikozvino mazai anotengwa nemishonga yekuchengetedza uye yakasungwa nenzira yepanyama munzvimbo dzakapoteredzwa apo shiri hadzina mukana wekuzvitora uye vana vanobvumirwa kupinda mugungwa mushure mamazuva maviri panguva yeusiku iyo inopa ivo mukana wakanaka wekupona.
Colombo City Tour:
Dzaira mumugwagwa wekutengeserana uye weguta nzvimbo inonzi Fort, yakavakwa nevaPutukezi muzana remakore re16th. Enda kune misika yakabatikana uye misika yePetta, shanyira muBuddhist uye temberi yechiHindu, chechi yekare yechiDutch uye ramba uchienda kuCinnamon Gardens kunogara. Dhiya iri kupfuura Town Hall, Independence Square uye BMCH (International Convention Center).
Kutenga pa; (pane chido)
Majestic cityLiberty Plaza
Kudya uye Kudya Manheru Masikati anogara paHarare muColombo.
ZUVA 05: COLOMBO - KATUNAYAKE - 37 Kms - 1 Hour
Chikudya chamangwanani paIndaneti muColombo.
Maererano nenguva yako yebhazi inobva kuBanaranaike International Airport, Katunayake yeKubva. Mugumo wekurwendo.
Terms uye Conditions Reservation Policy Cancellation Policy Blog Testimonials Taura nesu Car Rental Sitemap
Nzvimbo dzeMatombo Matswende © 2018. Zvose Zvakachengetedzwa
Car Rental Blog Testimonials udza mashoko